Satani Ariko Zvechokwadi Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Moore Nahuatl (Central) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
Satani Ariko Here?
Chivezwa chiri kuMadrid, muSpain, chiri kuratidza Satani sengirozi yakapanduka uye yakaipa
“Ndakakurira munyika yeEl Salvador. Pandaiita misikanzwa, amai vangu vaiti, ‘Satani ari kuuya kuzokutora!’ Ini ndaibva ndati, ‘Ngaauye!’ Ndinotenda muna Mwari kwete muna Satani.”—ROGELIO.
Unobvumirana nemafungiro aiva naRogelio achiri mudiki here? Ipfungwa ipi inoita seine musoro kwauri pane dzinotevera?
Satani haako asi hunongova uipi huri muvanhu.
Satani ariko asi haanyanyi kufunga nezvevanhu.
Satani chisikwa chine simba chisingaoneki chiri kufurira vanhu zvakanyanya.
Imwe neimwe yepfungwa idzi ine vanhu vangatosvika mamiriyoni vanoitsigira. Asi zvine basa here kuona kuti ndeipi yakarurama? Kana kusina chinonzi Satani, vose vanoti ariko vakarasika. Kana Satani ariko asi asina basa nevanhu, vakawanda vanozvinetsa kana kuti vanongotya pasina. Asi kana Satani ariko uye achifurira vanhu, zvinoreva kuti ane ngozi kupfuura zvinofungwa nevakawanda.
Ngationgororei kuti Magwaro Matsvene anopindura sei mibvunzo iyi: Satani chii kana kuti ndiani? Hunongovawo uipi here kana kuti chisikwa chisingaoneki? Kana Satani ari chisikwa, angava nengozi here kwauri? Kana aine ngozi, ungazvidzivirira sei?